सप्तरीमा पट्रोलमा कालो बजारी गर्ने ३ जना पक्राउ : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश २ सप्तरीमा पट्रोलमा कालो बजारी गर्ने ३ जना पक्राउ
सप्तरीमा पट्रोलमा कालो बजारी गर्ने ३ जना पक्राउ
राजविराज । सप्तरीको सुरुङगा नगरपालिका कुशहास्थित विभिन्न पसलमा बढी मूल्य लिई पेट्रोलमा कालोबजारी गर्ने तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ । नगरपालिका–५ कुशाहास्थित पसलमा अवैधरूपमा पेट्रोल प्रतिलिटर रु १२० का दरले बिक्री वितरण गर्ने तीन जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक बाबुराम कार्कीले बताए ।
पक्राउ पर्नेमा नगरपालिका–७ का ३७ वर्षीय अरुण चौधरी, ४० वर्षीय अली हसन र वडा नं ५ का ३० वर्षीय तेजनारायण भगत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका चौधरीको साथबाट १७ लिटर, हसनको साथबाट पाँच लिटर र भगतको साथ दुई लिटर अवैधरूपमा पेट्रोलमा कालोबजारी गरी बेचबिखन गरिरहेको अवस्थामा बरामद गरिएको प्रहरी निरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए ।
यता पक्राउ परेका तीनै जनालाई आवश्यक कारवाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनामा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
एमके माझी - April 16, 2021 0
सप्तरी । जंगली हात्तिको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । खेत रेखरेख गर्न गएका सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका १ भारदह (कोशी ब्यारेज) का...
वैशाख ११ मा धरहराको उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ११ गते धरहराको उद्घाटन गर्ने भएका छन् । पुनर्निर्माण गरिएको धरहराको टावरतर्फको भाग उद्घाटन गर्न लागिएको हो...
चार दिनमा ६७ अंकले बढ्यो नेप्से
काठमाडौं । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ६६ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार यस साता १ अर्ब ५९ करोड...
Breaking News Sushila Bishwokarma - February 26, 2020 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रष्ट सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी १३ फागुनमा सार्वजनिक गरिएको विवरणले अनावश्यक भ्रम सृजना गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका...
सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरण : काँग्रेसद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध
Not-to-be-missed Sushila Bishwokarma - February 20, 2020 0
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । निर्धारित...
Exclusive Roshan Shrestha - April 5, 2020 0
पोर्चुगल । विश्वभर महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण युरोपमा रहेका नेपालीहरु पनि उच्च जोखिममा परेका छन् । चीनको उहान शहरबाट...
राजस्व छल्ने २८ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३२ करोड ४६ लाखको मुद्दा
Breaking News Kumar Raut - January 2, 2021 0
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राजस्व छलीमा संलग्न २८ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले...
समाज Dhruba Lamsal - November 19, 2020 0
पुर्नगठित जनता समाजवादी पार्टीमा असन्तुष्टि चुलिदै
भर्खरै Dhruba Lamsal - June 10, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए लगत्तै सो पार्टी भित्र एक पछि अर्को असन्तुष्टिका स्वरहरु उठ्न थालेको छ । पार्टी...
अस्पताल नै जाँदैनन् बिरामी
Editor-Picks Kumar Raut - April 6, 2020 0
चितवन । चितवनमा पछिल्लो समय अस्पताल जाने बिरामीको संख्यामा कमी आएको छ । चिकित्सकले बिरामी छुँदैनन्, अस्पतालले भर्ना लिँदैन र गेटबाटै फर्काइन्छ भन्ने...
१० महिना पछि हल खोल्ने अनुमति, नयाँ फिल्मलाई बोर्डको सुविधा
Editor-Picks Kumar Raut - January 12, 2021 0
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण गत चैतबाट बन्द भएको सिनेमा हल अब खुल्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिनेमा हल खोल्ने निर्णय...
नीजि अस्पतालले राख्न नमानेपछि पर्साका कोरोना संक्रमित विद्यालयमा
Breaking News Sushila Bishwokarma - May 14, 2020 0
वीरगञ्ज । वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ नपुगेपछि पर्सामा कोरोना संक्रमित बिरामीलाई विद्यालयमा राख्न थालिएको छ । देशभर सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामी...
रबिन कटेल - April 17, 2021
एजेन्सी - April 16, 2021